Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Tale Mpanatanteraka Vonjimaika Vaovao hitarika ao amin'ny TPDCo
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Tale Mpanatanteraka vonjimaika TPDCo vaovao Georgeia Robinson
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, androany dia nifampidinika tamin'ny sekretera maharitra an'ny minisitra, Jennifer Griffith, sy ny filankevi-pitantanan'ny orinasa fampivoarana ny fizahan-tany (TPDCo).
Notendren'ny Birao i Georgeia Robinson izay talen'ny serivisy ho an'ny orinasa misalahy eo amin'ny toeran'ny Tale Mpanatanteraka vonjimaika.
Andriamatoa Lionel Myrie, talen'ny fampiroboroboana ny vokatra sy ny fizahan-tany amin'ny vondrom-piarahamonina ankehitriny dia tsy handray izany toerana vonjimaika izany.
Horaisina amin'ity volana ity ny fandraisana mpiasa ho talen'ny Executive maharitra maharitra.
Taorian'io fifampidinihana io dia notendren'ny Birao i Georgeia Robinson, talen'ny serivisy ho an'ny orinasa TPDCo, Tale mpanatanteraka vonjimaika mandra-pahatongan'ny famaranana talen'ny mpanatanteraka vaovao amin'ity volana ity.
Andriamatoa Lionel Myrie, talen'ny fampandrosoana ny vokatra sy ny fizahan-tany amin'ny fiarahamonina dia tsy handray ny toeran'ny Tale Mpanatanteraka Vonjimaika.
The Orinasa fampivoarana ny fizahan-tany fizahan-tany Ltd. (TPDCo) dia masoivoho foibe notendren'ny Governemantan'i Jamaika hanamora ny fikojakojana, fampandrosoana ary fanatsarana ny vokatra fizahan-tany. TPDCo dia niasa nanomboka ny 5 aprily 1996, ary voasoratra ho orinasa tsy miankina eo ambany fiadidian'ny minisiteran'ny fizahantany. Ny filankevi-pitantanana iray dia manara-maso ny politikan'ny orinasa sy ny drafitra paikadiny. Ny Tale Mpanatanteraka dia manao tatitra amin'ny filohan'ny Birao ary manana fifandraisana miasa amin'ny minisitry ny fizahantany sy ny sekretera maharitra ao amin'ny Ministeran'ny fizahantany any Jamaika.
Ny orinasa dia natao hanohanana ireo sampan-draharaham-panjakana sy goavam-be amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fizahantany, indrindra amin'ny alàlan'ny fandrindrana sy ny fanamorana ny hetsika eo amin'ny tombontsoam-panjakana sy ny sehatra tsy miankina.
Ny mpikambana ao amin'ny Birao TPDCo dia nalaina avy tamin'ny sehatra tsy miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ary ao anatin'izany ny solontenan'ny Fikambanana Hotel & Tourist an'ny Jamaica (JHTA), ny Fikambanan'ny Villas and Apartments (JAVA) ao Jamaika ary ny faritra iainana tsirairay. Ny talen'ny TPDCo dia tendren'ny governemanta.
Mba hanamorana ny fanamorana, ny fampandrosoana ary ny fanatsarana ny vokatra fizahan-tany amin'ny alalàn'ny mpiasa mahay sy mahay manatsara ny traikefan'ny mpitsidika amin'ny alàlan'ny fananganana marimaritra iraisana sy fiaraha-miasa stratejika amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria mba hitomboan'ny fitomboana ara-tsosialy sy toekarena. Ny Company Product Development Development Limited (TPDCo) dia masoivoho foibe notendren'ny Governemanta Jamaica hanamora ny fikojakojana, ny fampandrosoana ary ny fanatsarana ny vokatra fizahantany.
TPDCo, orinasa iray fampiroboroboana ny vokatra eran-tany izay mandray anjara amin'ny vokatra turista sy fanatsarana isan-karazany ny mpitsidika, izay nihatsara ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny Jamaikana rehetra.